Otú Ofufe Earthwa Si Kwadebe Anyị Maka Eluigwe | EKPERE NA OZI
Otu ofufe ofufe nke ụwa si akwadebe anyị maka eluigwe
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 26, 2020 Ọgọstụ 26, 2020
You nwetụla mgbe ị na-eche otú eluigwe ga-adị? Ọ bụ ezie na Akwụkwọ Nsọ enyeghị anyị ọtụtụ nkọwa gbasara ihe ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị ga-adị (ma ọ bụ ọbụlagodi na ọ dị ụbọchị, ebe Chineke na-arụ ọrụ karịa nghọta anyị banyere oge), enyere anyị ihe osise nke ihe ọ ga-etinye ebe ahụ Mkpughe 4: 1-11.
Mo nke Chineke bu John bata n’otu oche eze ahu dika Chineke n’onwe ya. Ọ bụghị nanị Chineke nọ n'ọnụ ụlọ ocheeze ya; ndị okenye iri abụọ na anọ gbara ya gburugburu ịnọ n’ocheeze, yi uwe ọcha na okpueze ọlaedo. Ọzọkwa, e nwere oriọna asaa nke ọkụ na ihe anọ na-adịghị ahụkebe na-agbakwunye na ofufe na-aga n’ihu na nke jupụtara na mmụọ nke na-eme.
Ofufe zuru oke, nke dị n'eluigwe
Oburu na ayi akowa elu igwe na okwu, obu ofufe.
Ihe anọ ahụ e kere eke (ma eleghị anya, ndị seraf ma ọ bụ ndị mmụọ ozi) nwere ọrụ ma na-eme ya oge niile. Ha anaghị akwụsị ịsị: "Nsọ, nsọ, nsọ ka Onyenwe anyị Chineke, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile nọ, onye dị adị na onye na-abịa abịa". Ndị okenye iri abụọ na anọ ahụ (ndị na-anọchite anya ndị agbapụtara n’oge) dara n’ihu ocheeze Chineke, tụda okpueze ha n’ụkwụ ya ma bulie ukwe otuto:
“I kwesiri, Onye-nwe-ayi na Chineke-ayi, inara otuto, nsọpuru na ike; n'ihi na Gi onwe-gi kere ihe nile, o bu kwa ochicho Gi ka ha diri, ka ekere kwa ha ”(Nkpughe 4:11).
Nke a bụ ihe anyị ga-eme n’eluigwe. N’ikpe-azu anyi g’enwe ike ife Chukwu nuzo nke g’eme nkpuru obi anyi nma ma anyi ga-asopuru Ya dika O kwesiri isi kwanyere ya ugwu. Mgbalị ọ bụla nke ife ofufe n'ụwa a bụ uwe eji emegharị ahụ maka ahụmịhe n'ezie. Chineke kwere ka Jọn mee ka anyị mata ihe anyị ga-atụ anya ya ka anyị wee nwee ike ịkwadebe. Ọ chọrọ ka anyị mata na ibi ndụ dị ka a ga-asị na anyị nọrịị n'ihu ocheeze ahụ ga-eduga anyị n'ocheeze na mmeri.
Olee otu Chineke puru inata otuto, ugwu, na ike site na ndu anyi taa?
Ihe John huru n’ime ime ocheeze nke Eluigwe na-ekpughe ihe ife Chineke putara bu iji nyeghachi ya ebube, ugwu na ikike nke ya. Okwu a na-anata bụ lambanō na ọ pụtara iji aka ma ọ bụ jidere mmadụ ma ọ bụ ihe ọ bụla iji ya. Ọ bụ iwere ihe mmadụ nwere, iwere onwe ya ma ọ bụ mepụta otu.
Abasi odot ndifiok ubong, ukpono, ye odudu eke Enye enyede ke usung, koro Enye odot, onyung ada mmo anam uduak, uduak ye uduak Esie. Ndia bu uzo ato anyi puru isi fee ofufe taa iji kwadobe elu-igwe.
1. Anyi n’eto Chukwu Nna
"Ọ bụkwa n'ihi nke a ka Chukwu buliri ya elu wee nye ya aha dị elu karịa aha niile, nke mere na n'aha Jizọs, ikpere niile ga-ehulata, nke ndị nọ n'eluigwe, n'ụwa na n'okpuru ọchịchị. ụwa, na ire niile ga-ekwupụta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwenụ, ka e wee nye Chineke Nna otuto. ”(Ndị Filipaị 2: 9-11).
Gloria [doxa] bụ isi pụtara echiche ma ọ bụ atụmatụ. Ọ bụ nnabata na nzaghachi nye ngosipụta nke agwa na ụzọ Ya. Anyị na-enye Chineke otuto mgbe anyị nwere echiche ziri ezi na nghọta ziri ezi banyere njirimara na njirimara ya. Ebube Chineke bu aha Ya; amata onye ọ bụ, anyị na-enye ya otuto o kwesịrị.
Rome 1: 18-32 etịn̄ se isitịbede ke ini owo esịnde Abasi onyụn̄ esịnde enye ubọn̄. Kama ịmata ụdị onye ọ bụ na àgwà ya, ha na-ahọrọ ife ụwa e kere eke, na-akpọkwara onwe ha chi. Ihe si na ya pụta bụ mbibi n'ime omume rụrụ arụ dịka Chineke nyefere ha n'aka ọchịchọ mmehie ha. Akwụkwọ akụkọ New York Times mere n'oge na-adịbeghị anya mgbasa ozi zuru oke nke kwupụtara n'ihu ọrịa coronavirus, ọ bụghị Chineke ihe dị mkpa, mana sayensị na ihe kpatara ya. Jụ ebube Chineke na-eduga anyị ikwu nkwupụta nzuzu ma dị egwu.
Kedụ ka anyị ga esi akwado maka elu-igwe? Site n’ịmụta akparamagwa nke Chineke na akparamagwa Ya na enweghi ngwụcha akọwapụtara ya n’ime Akwụkwọ Nsọ na ịnabata ma kọwaa ya na ọdịbendị na-ekweghị ekwe. Chineke dị nsọ, bụrụ onye pụrụ ime ihe niile, onye maara ihe niile, onye pụrụ ime ihe niile, onye nọ ebe niile, dị ka onye ezi omume na onye ziri ezi. Ọ karịrị akarị, ọ dị na mpụga oge anyị na oge anyị. Naanị ya na-akọwa ịhụnanya n'ihi na ọ bụ ịhụnanya. Ọ dị adị onwe ya, ọ dabereghị na ikike ma ọ bụ ikike ọzọ dị na mpụga ịdị adị ya. O nwere ọmịiko, nwee ogologo ntachi obi, nwee obi ebere, mara ihe, kee ihe, eziokwu ma kwesị ntụkwasị obi.
Toonụ Nna n'ihi ihe ọ bụ. Nye Chineke otuto.
2. Anyị na-asọpụrụ Ọkpara ahụ, bụ Jizọs Kraịst
Okwu a sụgharịrị ịbụ nsọpụrụ na-ezo aka na ọnụego nke etinyere ọnụahịa; ọ bụ ụgwọ a kwụrụ ma ọ bụ nata maka mmadụ ma ọ bụ ihe a zụtara ma ọ bụ ree. Sọpụrụ Jizọs pụtara inye Ya ezi uru, ịmata ezi ọnụ ahịa Ya. Ọ bụ nsọpụrụ Kraịst na uru ya na-enweghị atụ; ọ bụ ịdị oke ọnụ Ya, dịka nkume isi nkuku (1 Pita 2: 7).
“Ọ bụrụ na ị gbanwee dị ka Nna, Onye na-ekpe ikpe n'eleghị mmadụ anya n'ihu dị ka ọrụ onye ọ bụla si dị, na-eme ihe ụjọ mgbe ị nọ n'ụwa; ebe unu matara na ejighi ihe nbibi, dika ọla-ọcha ma-ọbu ọla-edo, bemedaputaghi gi n'uzọ ebighi-ebi nke ndu-unu, nke an inheritedketa n'aka nna-gi-hà, kama were ọbara di oké ọnu-ahia, dika nke nwa-aturu zuru okè na ntupọ, ọbara nke Kraist. Pita 1: 1-17).
Nna-ya adighi-ekpe kwa onye ọ bula ikpé, kama O nyewo Ọkpara-Ya ikpé nile, ka madu nile we sopuru Ọkpara ahu, dika ha nāsọpuru Nna-Ya. Onye ọ bụla nke na-adịghị asọpụrụ Ọkpara ahụ adịghị asọpụrụ Nna ya nke zitere ya ”(Jọn 5: 22-23).
N'ihi nnukwu ụgwọ a kwụrụ maka nzọpụta anyị, anyị ghọtara uru mgbapụta anyị bara. Anyị na-eji ihe ọ bụla ọzọ n'ime ndụ anyị akpọrọ ihe maka uru anyị bara n'ime Kraịst. Ikwu na izi ezi anyị “na-atụle” ma ghọta uru ọ bara, ihe ndị ọzọ ga-adị ntakịrị. Anyị na-elekọta ihe anyị ji kpọrọ ihe; anyị na-asọpụrụ ya. Anyị nwere ekele maka aja nke Kraịst chụrụ n'ihi anyị site na omimi nke ịdị nsọ nke ndụ anyị. Ọ bụrụ na anyị ejighị Kraịst kpọrọ ihe, anyị ga-echehie oke mmehie anyị. Anyi ga-eche na nmehie ejighi oke ma were amara na ngbaghara.
Kedu ihe ọ bụ na ndụ anyị ka anyị kwesịrị ịtụle, na-atụle ya n'ọchịchọ anyị ịsọpụrụ Kraịst karịa ihe niile? Thingsfọdụ ihe anyị nwere ike ịtụle bụ aha ọma anyị, oge anyị, ego anyị, onyinye anyị, akụnụba anyị yana ihe egwuregwu anyị. Ndi mmokpono Abasi ke ndikpono Christ? Mgbe ndị ọzọ hụrụ nhọrọ m, okwu m na omume m, ha na-ahụ onye na-asọpụrụ Jizọs ka ha ga-ajụ ajụjụ banyere ihe m na-ebute ụzọ na ụkpụrụ m?
3. Ike Mmụọ Nsọ
“Ma ọ sịrị m: 'Amara m ezuworo gị, n'ihi na ike zuru oke n'adịghị ike'. N'ihi ya, jiri ọ gladụ dị ukwuu wee chọọ ịnya isi karịa adịghị ike m, ka ike nke Kraịst biri n'ime m ”(2 Ndị Kọrịnt 12: 9).
Ike a na-ezo aka n'ike ekere oke nke Chineke bi n'ime Ya site n'onodu okike Ya. Ọ bụ mbọ nke ike ya. A na-ahụ otu ike a ọtụtụ oge na Akwụkwọ Nsọ. Ọ bụ ike nke Jizọs ji rụọ ọrụ ebube na ndịozi kwusara oziọma ma rụọkwa ọrụ ebube iji gbaa akaebe eziokwu nke okwu ha. O bu otu ike ahu ka Chineke ji mee ka Jisos si n’onwu bilie ma gakwa eme ka anyi si n’onwu bilie. Ọ bụ ike nke oziọma maka nzọpụta.
Inye Chineke ike putara ka Mo nke Chineke biri, rụọ ọrụ, ma tinye ike Ya na ndụ anyị. Ọ pụtara ịmata ike anyị nwere site na mmụọ nke Chineke n'ime na ibi na mmeri, ike, ntụkwasị obi na ịdị nsọ. Bọchị na-eche nke edoghị anya na "na-enwetụbeghị ụdị ya" ụbọchị ọ withụ na olileanya n'ihi na ha na-eme ka anyị na-erukwu nso na ocheeze!
Kedu ihe ị na-achọ ime na ndụ gị naanị gị? Ebee ka i siri ike? Kedụ ọnọdụ ndị dị na ndụ gị ikwesiri ikwe ka mmụọ nke Chineke rụọ ọrụ n’ime gị? Nnyin imekeme ndikpono Abasi ke ndikut odudu Esie ke ndikpuhore mme idioknwed nnyin, ke ufokemana nnyin, nnyung ukpeb ndito nyin ndifiok nnyung mmama Abasi. Odudu Esie anam nnyin ikeme ndibuana iko Abasi ke usem emana nnyin. N’onwe anyị, anyị na-ekwe ka Mmụọ nke Chineke chịa obi na uche anyị site n’itinye oge n’ekpere ma na-amụ okwu Chineke. .
Anyị na-efe Chineke maka ihe ọ bụ, na-enye ya otuto.
Anyị na-asọpụrụ Jizọs maka ịdị oke ọnụ ya, na-asọpụrụ ya karịa ihe ọ bụla ọzọ.
Anyị na-efe Mmụọ Nsọ maka ike ya, ebe ọ na-agbanwe anyị n'ime ngosipụta a na-ahụ anya nke ebube Chineke.
Jikere maka ofufe ebighi ebi
"Ma anyị niile, ekpuchighị ekpuchi, na-atụgharị uche n'ebube nke Onyenwe anyị dị ka enyo, e mere anyị ka anyị yie otu onyinyo nke ebube baa n'ebube, dịka ọ bụ site n'aka Onyenwe anyị Mmụọ Nsọ" (2 Ndị Kọrịnt 3:18)
Anyị na-efe Chineke ugbu a iji kwadebe maka ofufe ebighi ebi, mana ka ụwa wee hụ onye Chineke bụ n'ezie ma zaghachi site n'inye ya otuto. Ndinam Christ edi akpan n̄kpọ ke uwem nnyịn owụt mbon en̄wen nte ẹkponode Jesus ke ọsọn̄urua ye nte ọsọn̄urua n̄kpọuto mmọ. Uwutnkpo nnyin kabanga edisana uwem ye nkopitem ayarade nte ke mbon efen nko ekeme ndibo obufa Edisana Spirit ke obufa ye edikpuho uwem.
“Unu bụ nnu nke ụwa; ma ọ bụrụ na nnu adịkwaghị ụtọ, olee otu a ga-esi mee ya nnu ọzọ? Ọ baghịzi uru ọ bụla, ma e wezụga ịtụfu ya na ịzọ mmadụ ụkwụ. Are bụ ìhè nke ụwa. Apughi izo obodo nke ewuworo n'elu ugwu; ọ dighi kwa onye ọ bula n lighttiye oriọna, dọba ya n'okpuru nkata, kama n'elu ihe-idọba-oriọna, n andnye kwa ndi nile nọ n'ulo ahu ìhè. Meenụ ka ìhè unu nwuo n’ihu mmadụ ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee too Nna unu nke bi n’eluigwe otuto ”(Matiu 5: 13-16).
Ugbu a, karia mgbe ọ bụla, ụwa kwesịrị ileba anya na Chi anyị na-efe. Dị ka ndị na-eso ụzọ Kraịst, anyị nwere echiche ebighi ebi: Anyị na-efe Chineke ruo mgbe ebighị ebi. Obodo anyi juputara n’egwu na ogbaaghara; anyi bu ndi mmadu kewara na otutu ihe ma uwa anyi choro ihu onye no n’oche eze n’eluigwe. Fee Chukwu taa site n’obi gị dum, mkpụrụ obi gị dum, uche gị niile na ike gị niile ka ndị ọzọ hụkwa ebube ya na agụụ ife ya ofufe.
"Na nke a unu na-a rejoiceụrị ọ greatlyụ nke ukwuu, ọ bụ ezie na ọ dịtụla nwa oge, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a na-akpagbu unu site na nnwale dị iche iche, nke mere na nnwale nke okwukwe unu, dịnụ oke ọnụ ahịa karịa ọlaedo nke na-ala n'iyi, ọ bụrụgodị na a nwaa ya ọkụ, ọ na-apụta na ọ na-eweta otuto, otuto na nsọpụrụ maka mkpughe nke Jizọs Kraịst; ma obu ezie na unu ahubeghi ya, unu huru ya n'anya, ma obu ezie na adigh ahukwa ya ugbua, kama unu kwere na ya, unu nuria onu nke uku site na onu nke anpughi ikowa ma juputa n'ebube ”(1 Pita 1: 6-8).
Nke gara aga Post Gara aga post:Pope Francis jụrụ Kadịnal na njem njem na Lourdes maka ekpere
Next Post → Post ozo:You na-elezi anya n'ọtụtụ ụzọ Chineke na-anwa ịbanye na ndụ gị?